Global Voices teny Malagasy » Tatitra Avy Amin’ny Vovonana Nataon’ny Biraom-Pitantanana Global Voices · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Marsa 2018 15:06 GMT 1	 · Mpanoratra Ivan Sigal Nandika Liva Andriamanantena
Iray tamin'ireo fivoriana izay natao nandritra ny Vovonan'ny Vondrom-piarahamonina GV tany Sri Lanka ny adihevitra lehibe maro nifanaovana tamin'ireo mpikambana ao amin'ny biraom-pitantanana . Ny hampahatsiahy ny vondrom-piarahamonina ny andraikitra sy ny adidin'ny biraom-pitantanana tamin'ny fiteny mazava no tanjonay, ary hanome fahafahana ho an'ny mpanatrika mba haneho hevitra sy haneho fanontaniana.
Ny fihaonana in-efatra isan-taona no andraikitra voalohany sahanin'ny biraom-pitantanana ao amin'ny Global Voices ary ny fandraketana ny adihevitra nifanaovan'izy ireo araka ny fizotram-pandaharana. Aorian'ny fivorian'ny birao tsirairay dia zarainay ho an'ny besinimaro ireo fizotram-pandaharana amin'ny antsipiriany ireo ao amin'ny lisitry ny vondrom-piarahamonina, mba hahafahanay mametraka ny fizotran'ny fandroson'ny fomba sy ny asan'ny birao mba ho hita sy ho fantatry ny besinimaro araka izay azo atao. Ahitana ny zava-drehetra noresahinay nandritra ny fivoriana ny fizotram-pandaharana zarainay amin'ny vondrom-piarahamonina, afa-tsy ny vaovao saropady toy ny fiarovana sy ny filaminana, ny olana sasantsasany momba ny mpikambana, ny vaovao ara-bola, ary ny antsipiriany momba ny fivorian'ny birao mpanatanteraka. Atrehan'ireo solontenan'ny birao miisa sivy sy ireo tale mpitantana sy mpanatanteraka ny fivorian'ny biraom-pitantanana. Hitanao ato amin'ny dosie PDF  ireo antsipirian'ny fivorian'ny biraon'ny vondrom-piarahamonina nandritra ny Vovonana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/13/116180/
 mpikambana ao amin'ny biraom-pitantanana: https://globalvoices.org/who-we-are/board-of-directors/
 dosie PDF: https://community.globalvoices.org/wp-content/uploads/2018/03/Board_Stichting-Global-Voies-Q4-2017_Minutes_2017.12.01_Community.pdf